Akhriso Qaar ka mida Xildhibaanadda Baarlamaanka wixii ay ka yiraahdeen Qadiyadda Qalbidhagax – Hornafrik Media Network
Akhriso Qaar ka mida Xildhibaanadda Baarlamaanka wixii ay ka yiraahdeen Qadiyadda Qalbidhagax
By HornAfrik	 On Nov 18, 2017
Xildhibaanadda Baarlamaanka ayaa Aragtiyo kala duwan ka dhiibtay Qadiyadda Qalbidhagax oo uu Maanta Goluhu ka dooday, Waxayna isku raaceen in hab aan sharci ahayn loo maray dhiibista Qalbidhagax.
Xildhibaan C/raxmaan Maxamed Xuseen Odowaa oo kamid ah mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in aanu aamisaneyn in madaxda dowladda Federaalka ah aysan ka war hayn markii C/kariin Qalbi Dhagax loo dhiibayey dowladda Itoobiya.
Waxa uu tilmaamay xildhibaanka in dhiibistii Qalbi Dhagax ahayd qiyaano weyn oo qalad ah una baahan in la saxo.
Mar uu xildhibaan Odowaa soo hadal qaaday arrinta ONLF ayuu soo jeediyey in haddii aan wax loo tari karin ururkaasi ay haboon tahay inuu ka nabad galo dowladda waa sida uu hadalka u dhigaye.
Sidoo kale xildhibaanka ayaa soo jeediyey in la ciqaabo cid walbo oo ka dambeysay dhiibista Qalbi Dhagax.
“Mudane guddoomiye sida ku cad warbixnta guddiga arrinta Qalbi Dhagax lifaaqyada sida ku cad wasaaradda amniga ma ogeyn, wasiirka cadaaladda waa ka diiday, hay’adda socdaalka ma ogeyn, hay’adda diyaaradaha ma ogeyn, cid la ogeyd madaxda sare ma jirin, waxaan rabaa in aan mas’uuliyadda laga gamban, waxaan rabaa inaan halkaan kasoo jeediyo ugu yaraan in dhiibista Qalbi Dhagax ahayd qiyaano weyn oo qalad ah in la saxana loo baahan yahay, ONLF haddii aan wax u tari karin iney naga nabad gasho, iyada iyo Itoobiya haddii aan heshiisiin karno waa shaqo weyn oo la qabtay… waxaan aad iyo aad ula yaabannahay qof walbo oo baarlamaanka fadhiya ama shacabka Soomaaliyeed meesha uu rabo ha joogee ee madaxda ku difaaca dhiibista Qalbi Dhagax, ninkii walaalkaa loo xiirow adna berri soo qoyso waaye.. waxaan rabaa guddoomiye inaan ilaahay hortiisa ku marqaati furo inaan raali ka ahayn dhiibista qalbi dhagax, ogoleyn, dambi ay tahay, ayna tahay in la ciqaabo ciddii geystay, ma aaminsani iney hay’adda nabad sugidda tahay, ma aaminsani ineysan madax ogeyn, haddii aysan ogeyn waa musiibo, haddii ay ogaayeenna waa musiibo ka weyn”
Ugu dambeyn, Xildhibaan C/raxmaan Maxamed Xuseen Odowaa ayaa sheegay in isaga ka shaqsi ahaan waxa uu u tari karo Qalbi Dhagax ay tahay in reerkiisa u jaro gunnada Hal bil.
“Waxaan rabaa inaan halkaan ka sheego Qalbi Dhagax waxa ugu yar ee aan u tari karo waxay tahay Qoyskiisa bil guinnadeeda kamid ah ayaan ugu tabarrucay, idinkana waxaan idin ka codsanayaa inaad ugu tabarrucdaan” ayuu yiri Xildhibaan Odowaa.
Xilibaan Zakariye Xaaji Cabdi oo maanta ka hadlay kulanka golaha shacabka ee arrinta Qalbi-dhagax ayaa soo jeediyay labo, mid an in la soo celiyo Cabdikarim Qalbi-dhagax iyo midda ah in aan qof dambe la dhiibin.
Xilibaan Zakariye Xaaji Cabdi ayaa sheegay in baarlamaanka laga rabo in ay warqad u qoraan Dowladda Ethiopia oo ay ku dalbanayaan sidii loo soo celin lahaa Cabdikiriin Qalbi Dhagax
Waxaan rabaa guddoomiye arrintan siday aheyd baa loo abaaray oo ah labo qodob oo ugu muhiimsan oo ah wixii la sameeyay in ay sharci-darro ahaayeen, sidaa darteed waxaa muhiim ah, waxaa la yiraahdaa caano daatay, dabadooda ayaa la qabtaa, talooyinka la soo jeediyay
In marka ugu horeysa baarlamaanka go’aanka lagu daro, in dowladda Itoobiya baarlamaanka warqad u diraan, lagu soo celinayo, Maadaama xaq-darro dhacda hala soo celiyo waa in la yiraahdaa ama ciddii bixisay oo xukuumadda aheyd tiraahdaa hala soo celiyo, haddii wax naga dhaxeeyaan, daris ayaanu nahay, Maadaama qalad dhacay, Hala soo celiyo.
Cid dambe oo Soomaali ah ama muslim ah in aan la dhiibin, cidii dhiibtaana ay dambiile tahay, taasina waa in ay noqotaa go’aan baarlamaanka soo saaro
Xildhibaannada golaha shacabka ee baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa maanta go’aan ka gaaray arrinta Qalbi Dhagax kadib markii bishii August ay dowladda Federaalka dhiibtey.
Golaha shacabka oo Ansixiyay Natiijada Baaritaanka Guddigii Qalbi-dhagax.
Akhriso Nuxurka Warbixinta Guddiga loo xilsaaray inay soo baaraan Qadiyadii Qalbidhagax.